musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Laos Rural Tourism: Kugovana Ruwa
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Culinary • tsika nemagariro • dzidzo • Laos Kuputsa Nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kufarira muAsia Pacific yekushanyirwa kwekumaruwa yakakwira mumakumi emakore apfuura, zvakanyanya sekudzoserwa kwenyika kwakaitwa muna 19th-century Victorian England, uye nezvikonzero zvakafanana. Vanhu vari kukura mumadhorobha eAsia vari kutsvaga kutiza hupenyu hwavo hwazara-neguta, asi kazhinji husina kujairika, uye vari kuwedzera kutendeukira kuzororo nekuzorora mumaruwa.
Zvisinei, Asia Pacific inotarisana nemamiriro ezvinhu akasiyana nhasi kupfuura Thomas Cook muma1850s. Kuongorora chiitiko ichi chinokwira, Huzhou City, China, yakabatana nePacific Asia Travel Association (PATA) uye World Tourism Organisation (UNWTO) kuitisa The Second International Rural Tourism Conference kubva 16-18 Chikunguru 2017, muAnji County, Laos.
Panguva yekuvhura, PATA Chief Operating Officer Dale Lawrence akapa Mubairo weInternational Rural Tourism Destination Base Award kuna Anji County Magistrate Chen Yonghua. Huzhou nedunhu reAngi vanozivikanwa nezvikomo zvine masango, mhando dzemishenjere, chena tii, nzizi nemadhamu, mapandas, uye macalligraphy.
Sachigaro wePATA Foundation Peter Semone akabva atanga kuburitsa UNWTO chinyorwa, "Report on International Rural Tourism Development: An Asia Pacific Perspective". Gwaro rine mapeji mazana maviri rinopa zvidzidzo zvezviitiko munzvimbo gumi nemana dzekushanya kumaruwa muAsia Pacific, kusanganisira Huzhou.
VaSemone, munyori anotungamira mushumo uye mupepeti mukuru, vakati, "Sezvo gore ra2017 riri gore renyika dzese dzeSustainable Tourism yeBudiriro, taida kuti bhuku iri rinyatsotarisa maitiro akanaka uye nzira dzakabudirira mukusimudzira kushanya kwekushanya kumaruwa eAsia Pacific."
Shen Mingqua, Secretary weAnji County Tourism Committee, akabva agamuchira nhume dzinokwana mazana matatu kubva kunyika dzinopfuura gumi neshanu ku "Imba yeAsia Pacific Rural Tourism". Mr. Mingqua vakaratidza kubudirira kwaAnji kusanganisira pekutanga nzvimbo yakasarudzika yekushanya kwekumaruwa uye iye chete anogamuchira UN Habitat Award.
"Kugadziridza kwakakosha pakubudirira kwedu ... Isu takafanana nemuenzaniso wepfungwa dzekushanya kumaruwa," vakadaro VaMingqua, vachiona kuti Anji ava kuedza kukwezva boka reMICE. "Tinoda kuti mabhizinesi anoshanya pano kuti misangano igare uye tione kuti zvigadzirwa zvavo zvinobva kupi uye kuti zvinogadzirwa sei." Komiti yezvekushanya iri kunongedzawo mhuri kune zviitiko zvekurima.
Dr Ong Hong Peng vakurukura zvigadzirwa zvekushanya kumaruwa uye vakaratidza kuti zvinogona kupihwa zvinopfuura zvikamu zvese. "Huwandu hwezvigadzirwa hwakasiyana kwazvo uye hunogona kusanganisira zvese," akadaro aimbova Secretary General weMalaysia Ministry of Tourism neTsika akataura. Akapa "imba yezvikamu zvitanhatu zvekushanya kumaruwa" nemakamuri eanodhura emhando yepamusoro, zvisikwa zvakasarudzika, niche zvikamu, mhemberero uye zviitiko, MICE, uye tsika uye nhaka.
Dr Peng vakabva vaunza pekugara uye mararamiro mumusanganiswa. "Dzimba dzekugara dzakakosha mukushanya kwekumaruwa, asi dzinofanirwa kuve dzakasimba… kugadzira… kuwedzera kukosha ... Inogona kunge iri munzvimbo dzese dzekugara, sevamwe vanhu vanoda kuvanzika." Akakurudzira "musanganiswa wekugara mumusha uye imba yekutandarira".
Airbnb China Mutevedzeri weMutungamiriri An Li akapindira neimwe nzira yekugara kwekushanya kwekumaruwa. “Airbnb ndeyese 'yekutarisisa' mune hupfumi hwesheya. Kugovera kuri nani pane mahotera, uye vazhinji vanogamuchira vanogona kutora chikamu, "akadaro, achiwedzera," Airbnb-ers vanogara kaviri kana vakareba sevaya vanogara muchinyakare. Vanoda kushandisa mari zvakanyanya, uye vanoda pekugara pakanaka. ” Mai Li vakacherekedza kuti basa rekusimudzira kubva kuAirbnb rinoenda kuvakadzi vemuno, vechidiki, uye vakwegura.
China's Naked Retreats inopa hunyanzvi mune zvakasikwa pamwe chete nezviitiko zvisingakanganwiki zvekumaruwa zvinokanganisa nharaunda. "Shanghai yakazara uye ine hutsi, uye vanhu vanoda kuenda kuzororo kunze kweguta," akadaro Tolga Unan, maneja wecheni yekushanyira. “Tinoshandisa pamwe nekushanda nevanhu veko uye tinodzidza kubva kwavari nemararamiro avo. Chinangwa chedu ndechekuchengetedza pamwe nekuzadzisa, kwete kuchinja. ”
Conference Moderator uye CCTV Anotambira Bai Yansong akapinza kuti kushanya kwekumaruwa hakusi kwekumaruwa chete. "Madhorobha ari kushanduka kuita mamwe maruwa, nekugamuchira nzvimbo yakasvibira ... Haisi guta rekumaguta chete kuenda kumaruwa… inzira yemigwagwa miviri inobatanidza nekugovana."
Musangano uyu wakazoenda kumusangano wehurukuro pamusoro pe "Kugovana Ruwa Rwenyika", rwakaenderera mberi kubva pamashoko makuru. UNWTO Executive Secretary weAsia Pacific, Xu Jing, akaona kuti dunhu iri rakanonoka kushanya kwekumaruwa, uye rinofanirwa kugadzirisa iyo yekare modhi kuti isangane nemamiriro ekunze matsva ehupfumi. "Chiitiko chinoda kuve chechokwadi. Mamiriro acho ezvinhu anogona kunge ari enharaunda, asi pamba chaipo ndiyo marongero chaiwo. ”
VaJing vakawedzera, "Vashanyi vanoda kuita zvinoitwa nevanhu vemuno, uye vanoda kubatanidza mararamiro avo emumaguta nemamiriro ekumaruwa… Hupenyu hwekumaruwa kurota kwevaguta. Vakakanganwa kuti zvakaita sei ... kuteerera kurira kwechisiko nekuona nyeredzi. ” Akacherekedza kuti vanhu vekumaruwa, avo vakatamira kuguta, vanowanzo shanyira kumusha kwavo uye kunyange kuenda pamudyandigere.
Dr Liu Feng, Chief Advisor weBeijing Davost Group, vakapfuurira mberi, vachiti, "Vagari vemuGuta vanoitira shanje avo vanoshanyira kana kudzokera kumaruwa." Iye zvakare akatora pane zano raVaYansong re "kudzosera kumashure kusimudzira", achiona kukura mumadhorobha-emhando dzemaguta. "Kumaruwa hakuna tariro, uye vanhu vanoda kumutsiridza hupenyu hwechivanhu," akadaro. “Vanobatanidza kushanya kwekumaruwa nehupenyu hwemumaguta. Inonyanya kutaura nezvevanhu, yakaita seyedu, uye yakapusa. ”
Nhaurirano yakadzokera kumaruwa, seVatevedzeri Vachigaro wePATA Chris Bottrill vakaunza kubatana pamwe nekukwikwidza kana "mubatanidzwa". "Kuva nezvose kunovandudza chigadzirwa," akadaro, achinongedzera kuchokwadi chezviitiko uye musiyano. "Tinofanira kugoverana nzira nezvatinodzidza mukati uye pakati penyika." Panyaya yematambudziko akatarisana nekusimudzirwa kwekushanya kumaruwa, VaBottrill vakati kana uchishanda nevanhu vemumaruwa, unoda nguva, kuvimba nekuremekedzwa ...
UNWTO Nyanzvi yeKomiti Yenhengo Madam Xu Fan vakakurudzira "nhaka yenyika" kuva nekubata zvakanyanya, uye vakatarisa kuchizvarwa chinotevera kuti vagadzire mazano matsva. Nezve kumhanyisa kwebudiriro, vakati, “Kushanya kumaruwa kwakafanana nekudyara nekukohwa zvirimwa. Inoda kutarisirwa kwekuenderera, uye kutarisisa kunofanirwa kuve pahukama hwevarimi nevashanyi kwete mari yevarimi chete. Kushanya kumaruwa ndekwe mararamiro emaruwa kwete zvikamu zvacho. ”
UNWTO Senior Researcher Omar Nawaz akayambirawo nezvekukurumidza kukura, sezvo zvichikanganisa mhando. “Kuronga chinhu chimwe, asi kuita kunotora nguva. Unoda pfungwa yenguva refu… hukama pakati pekumaruwa nekushanya kwakawanda, ”akadaro, uye akakurudzira kudzidza kubva pazvikanganiso zvevamwe. “Teerera uye dzidza. Chinja kune chitsva chinodikanwa. Tarisa pane inosanganisa budiriro, uye gadzira kubva kunonoka kusvika nekukurumidza. Dambudziko rekushanyirwa kwekumaruwa kuri kusimukira nekukurumidza. "
Mr. Semone akafananidza kusimudzira kwekushanya kwekumaruwa muEurope neAsia Pacific. “Kushanya kwekuEurope kumaruwa kwave kungoramba kuchikudziridzwa kweanopfuura makore zana, panguva yekukura kukuru kwepakati nepakati. Asia Pacific yanga ichingova pamutsetse kwemakore makumi maviri kusvika makumi matatu, asi izvi zvinopa mukana wechirongwa chitsva cheAsia, ”vakadaro VaSemone. "Dzidza zvidzidzo kubva kuEurope, asi ita budiriro ive yakasarudzika neAsia."
VaSemone vakacherekedza kutenda kwavo kuti maAsia vanozeza kuvandudza kunyangwe paine vanhu vazhinji vekusika. "Vanhu veAsia vanowanzo teedzera pane kuyedza chimwe chakasiyana. Vanoda imwe yeAsia-centric yekuvandudza modhi. Kazhinji kazhinji, nyika dzeAsia dzinobatwa mukopiki yekateki, senge Laos. Ngatiitei chimwe chakasiyana. ”
Mr. Semone vakakurukurawo nezve "Chirevo nezveInternational Rural Tourism Development: An Asia Pacific Perspective". "Chirevo ichi chakanangana nekuratidzira simba rine kushanya kwekumaruwa kubatsira vanhu kutiza hurombo, kuvandudza raramo, uye kunonoka kutama kwemaguta."
Chirevo chinotsanangura "kushanya kwekumaruwa" se "chinhu chakasarudzika chekushanya kwakasimba uye kune mutoro." Zvirongwa zvinosanganisira nzvimbo yekumaruwa uye zviitiko zvinoramba zviri kumaruwa pachiyero, zvechinyakare hunhu, kukura zvishoma nezvishoma uye zvine hutano, uye zvine hukama nemabhizimusi madiki uye mhuri dzemuno.
Kushanya kwekumaruwa kunogona kusanganisira niche zvikamu zvekushanya senge ecotourism, agro-Tourism, uye geo-kushanya. "Kushanya kumaruwa hakusi chikamu chemusika chiri nyore uye chiri nyore kuzivikanwa," vakadaro VaSemone.
Imwe neimwe yemushumo gumi neshanu nyaya dzenyaya dzine dingindira rakasiyana, sezvo mamiriro ezvavanoenda achisiyana. Nekudaro, zvese zvinoongorora mutemo uye kuronga, kuvandudza zvigadzirwa, kushambadzira nekusimudzira, uye magariro pamwe nehupfumi. Hurukuro yekuvhara inotsvaga matambudziko akakosha, mikana, uye zvidzidzo zvakadzidzwa.
"Dzidzo idzi dzinoratidza kuti nemamiriro ezvinhu nemamiriro ezvinhu akakodzera, kushanya kwekumaruwa kunogona kugadzira matsva matsva munharaunda uye mudzimba," vakadaro VaSemone.
Akasimbisa kukosha kwemhando nyowani yePPP - vanhu-veruzhinji-vehukama kudyidzana - mune vese vanobatana vanomiririrwa. "Iyi ipfungwa nyowani inopokana nemamiriro ezvinhu emhanje dzekukwikwidzana vachida kubatsirwa pamwe chete."
Chirevo chinopedzisa kuti nzvimbo dzekushanya kumaruwa dzinofanirwa kugadzira marongero ane hunyanzvi uye anochengetedza mabhizinesi uye nzira dzekushambadzira dzinoshanda dzinoverengera mamiriro avo chaiwo. Mr. Semone vakapfupisa, "Kune nzira dzakasiyana kuenda kuchinangwa chimwe chete."
Nhasi, iwe unenge wakamanikidzwa kuwana yekushanyirwa yekumaruwa pasuru pawebhusaiti yaThomas Cook, asi vamwe vashanyi vekunze vari kutsvaga zororo rekuziva munzvimbo dzekusekondari dzeAsia, uye kushanya kwekumaruwa kunovapa imwe nzira yekugara yakatendeseka uye yakatendeseka yekumaruwa.